व्यापार बन्दै ठगी धन्दा बनिसक्यो आयुर्वेदः डा. प्रदीप केसी - Sagarmatha TV
नेपालका जडीबुटी नेपालीलाई नै विदेशीले महंगोमा बेच्छन्, तर नियमन छैन
संस्कृत शब्द आयु र वेदको संगमबाट बनेको आयुर्वेद विश्वकै प्राचिन चिकित्साशास्त्र हो । यो अथर्ववेदको उपवेद हो । मानव स्वास्थ्य शरीर, मन र आत्माको सन्तुलनमा निर्भर गर्छ भने आयुर्वेदका अनुसार मानव शरीर त्रि–दोष, सप्त धातु र मलबाट निर्मित छ । त्रि–दोषको सिद्धान्त नै आयुर्वेदको मुख्य आधार हो । बात, पित्त र कफ त्रि–दोषहरु हुन् ।
नेपाल सरकारले आयुर्वेद क्षेत्रमा खोलेको दोस्रो पुरानो संस्था आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीले १०५ वर्षदेखि निःशुल्क बिरामी परीक्षण एवं औषधि वितरण सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । १८ क्याबिन र १ सय जनरल बेडको सुविधासम्पन्न अन्तरंग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको यो अस्पतालले स्थापना कालदेखि नै नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिदै आइएको छ । तर पछिल्लो समयमा आयुर्वेदको क्षेत्रमा ठगीदेखि विकृतीसम्म बढेको छ । यिनै बिषयमा सगरमाथाकर्मी पुष्कर खतिववडाले आयुर्वेद चिकित्सालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीसंग गरेको कुराकानी गरेका छन् ।
आयुर्वेद के हो ? यो हाम्रो जीवनमा किन महत्वपूर्ण छ ?
– आयुर्वेद भनेको आफैँमा एउटा जीवनशैली हो । तर, धेरैले बुझेको मुलत जीवनमा लाग्ने रोगहरुको उपचार गर्ने एउटा पूर्वीय चिकित्सा पद्धती हो । हाम्रो यही चिकित्सा पद्धतीमार्फत रोगहरु लाग्न नदिने र लागेको रोगहरुलाई पास प्रभावरहित रुपमा प्रकृतीमा उपलब्ध जडीबुटीमार्फत गरिने उपचार पद्धती हो । त्यसैले यो हाम्रो जीवनमा महत्वपूर्ण छ ।
जडीबुटीलाई आयुर्वेद भन्न मिल्छ वा यो वृहत छ ?
जडीबुटी सम्पुर्ण रुपमा आयुर्वेद होइन । यो आयुर्वेदको एउटा अंग हो । आयुर्वेदका विभिन्न प्रकारका औषधिहरु बनाउने प्रकृयामा जडीबुटीलाई पनि प्रयोग गरिन्छ । केही मुख्य औषधि जडीबुटीबाट बन्ने भएकाले जडीबुटीलाई नै आयुर्वेद भनिएको जस्तो लाग्छ । तर त्यो पूर्ण रुपमा सत्य होइन ।
बजारमा पाइने अन्य औषधिको तुलनामा आयुर्वेदका औषधिले ढिलो काम गर्छ ? किन ?
– आयुर्वेदका औषधिहरु केमिकल्ली बनेका हुदैँनन् । यसमा रसायनिक प्रतिकृयाबाट तिनको अणुहरु सामान्य कम्पोनेण्ड निकालेर बनाइएका हुदैँनन् । जडीबुटीको पोषण, खनिज प्रयोग गरी सम्पुर्ण भाग प्रयोग गरी आयुर्वेद औषधि बनाइन्छ । त्यसैले यसको काम गराई ढिलो हुन्छ । आयुर्वेदको सिद्धान्तले, खाने बित्तिकै लाग्यो भन्ने हुदैँन । यो शरीरको दोष धातु र मलको सिद्धान्तमा हुन्छ । त्यसैको समानता ल्याउन समय लाग्ने भएको हो । साथै आधुनिक औषधिजस्तो बढेको घटाउने, घटेको बढाउने गरी सुक्ष्म रुपमा बनाइएको हुदैँन ।
– आयुर्वेदिकऔषधिको सेवनले यसको लत लाग्छ ?
त्यस्तो हुदैँन । लत लाग्ने औषधि आयुर्वेदमा कुनै पनि छैन । तर कोहि उत्पादकले मिश्रीत पाउडर हालेर लत लाग्ने बनाएर बिक्री गरेको हुनसक्छ । यसको परीक्षण गर्न नियामक निकाय र ल्याब हुनु पर्दछ । यसमा राज्य र आयुर्वेदका संस्थाहरुको ध्यान जानु जरुरी छ । साथै सबै अग्रसर र सचेत हुनु पर्दछ । हरेक पाउडर आयुर्वेद औषधि हुँदैनन् । कतिपयमा एलोपेथी औषधि र लत लगाउने मिसावट भइरहेको व्यापक सुनिएको छ । साथै एकै छिनमा निको गराउने शक्ति आयुर्वेदमा हुँदैन । अर्थात् यसको सेवनपछि लगत्तै निको हुनेगरी राम वाण औषधि आयुर्वेदमा हुँदैन । त्यसैले बजारमा पाइने दुखाई हराउने, क्यान्सर हराउने, लिंग कडा पार्ने यस्ता दाबा गर्ने औषधि आयुर्वेदिक होइनन् । यो झुट हो । मिसावटको नतिजा हो । यदि समयमा यसको परीक्षण नभए यसले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ ।
– आयुर्वेदिकऔषधि दीर्घकालीनरुपमा सेवन गर्नु पर्छ कि ? निको भएपछि छाड्न मिल्छ ?
मज्जाले छाड्न मिल्छ । निको भएपछि पनि सधैभरी खाइरहनु प¥यो भने त्यो आयुर्वेदको औषधि होइन । प्राय आयुर्वेदका औषधि सेवन थालेको १०/१५ दिनमा यसको लाभ देखिन थाल्दछ । त्यसपछि सुधार हँुदै गए चिकित्सकले भने बमोजिमको अवधिसम्म खाने हो । तर निको भएपछि वा औषधिसेवनको १५ दिनमा पनि कुनै सुधार नभएमा खान छाड्नु पर्दछ । साथै आयुर्वेदको औषधि आफैँ जतापायो त्यता किनेर खाने होइन । यो गलत हो । आफैँ पसलमा जाने, पसलेसंग मनलाग्दी किन्ने र खाने गर्दा यसले लाभ गर्दैन बरु क्षति हुनसक्छ ।
– के आयुर्वेदमा हरेक रोगको उपचार छ ?
त्यस्तो हुँदैन । हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोग लाग्न सक्छ । यि सबै रोगको उपचार एउटै औषधिवा एउटै चिकित्सा पद्धतीले गर्छ भन्ने हुँदैन । मुख्यतः आयुर्वेदको सिद्धान्त भनेको रोग लाग्न नदिनु हो । जीवनशैली सिकाउने हो । बढीभन्दा बढी प्रकृतीमा रहेर जीवनयापन गर्ने भन्ने हो । कुनै लागेका रोगहरु त्यस्तो छन् जो आकस्मिक अवस्था वा शल्यतन्त्र भन्दा बाहिर छन् भने त्यो अवस्थामा यसले बिस्तारै प्रभावकारी काम गर्दछ ।
– केही विज्ञापन र भारतीय योगी आयुर्वेदले सबै रोगको निवारण गर्छ भदै दाबी गर्छन् नि ?
दाबा गर्नेलाई कसले रोक्ने र ? त्यो व्यापारिक प्रयोजनकालागि आएका कुरा भए । यसलाई पत्याउनु पर्छ भन्ने छैन । भारतका औषधि वा ती औषधिले रोग ठिक गर्याे भने यो कहाँ प्रमाणित भयो ? त्यो खोजौं । आयुर्वेदबाट रोगको पहिचान गर्न सकिएला । तर आयुर्वेदका औषधिले नै सबै प्रकारको रोग निदान गर्छु भन्नु ठिक नहुन सक्छ । हुनत कति उत्पादनले क्यान्सर निको पार्छु भनेर दाबा गर्छन् । त्यस्तै धेरै गम्भिर अवस्थामा पुगिसकेको रोग पनि निको पार्छु भनेर गर्ने दाबा गर्छन् । यसमा धेरै त झुट हुने गरेको पाएको छु । किनभने सबै अवस्थाका रोग निको हुन्छ भन्ने हुदैँन । बरु थप बिग्रन नदिने, राम्रो जीवन दिने हुनसक्छ । जीवनयापन गराउन सहजीकरण गर्ने पनि हुनसक्छ । यि काम आयुर्वेदका औषधिले गर्छ । तर सबै प्रकारका रोग जुनसुकै अवस्थामा निको पार्ने दाबा चाँहि, सत्य होइन ।
– आयुर्वेदिकऔषधिका नाममा बजारमा उत्पादन चाँहि के हुन् त ? विज्ञापन पनि छ ।
यो एकदमै गम्भिर विषय हो । यो आयुर्वेदको भविष्यसंग जोडिएको बिषय पनि हो । सुरुवातमा आयुर्वेद व्यापारमुखी थिएन, सेवामुखी थियो । विभिन्न साधूसन्तहरु आफू निरोगी हुने र चेला शिष्यलाई पनि निरोगी पार्न आयुर्वेदको औषधि तयार पार्दथे । त्यो बेला आयुर्वेद औषधि आफू बनाउने, अरुलाई बनाउन सिकाउने र निःशुल्क बाड्ने गरिन्थ्यो । तर पछि यसमा व्यापार जोडियो । व्यापार जोडिएपछि मुनाफा हुन्छ । मुनाफा देखेपछि यसमा अनेक किसिमका प्रचार प्रसार गर्ने, विज्ञापन बजाउने र आयुर्वेदिक औषधिको धन्दा गर्नेहरु सलबलाए । यसरी विज्ञापन गरेर त्यसमा भनिए जस्तो यसले सबै रोग निर्मुल पार्छ भन्ने छैन । नेपालको कडा कानुनकाबीच नियमन फितलो हुँदा जसले जस्तो दाबा गरेर विज्ञापन गरे पनि जनता ठगिरहेका छन् । र आयुर्वेद व्यापार बन्दै ठगी धन्दा बनिसक्यो ।
– नेपालमा उत्पादन हुने जडीबुटी विदेश जान्छ, र उताबाट औषधिप्याक भएर नेपाल आउँछ । तर तपाईहरु जस्तो सरकारी आयुर्वेद संस्थान चाहीँ जडीबुटी पाउनु हुन्न किन ?
यो चक्रीय प्रणालीको शिकार बनेर हो । नेपालमा खेती वा उत्पादन हुने जडीबुटी भारत जान्छ र औषधि बनेर नेपाल आउँछ । यसो हुनुमा नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रमा लुछाचुडी बढी छ । वैद्यखानाकै कुरा गर्ने हो भने वैद्यखानाका औषधिहरु बजारमा एकदमै अभाव छ । नाम चलेका औषधिसमेत निकै अभाव छ । नरदेवीले अस्पतालले वैद्यखानाको कतिपय औषधि सीधै जिटुजी उसको मूल्यमा किन्छ, कुनै तेस्रो पार्टी बिना । तर अत्यधिक माग भएका धेरै औषधि हामीले समेत पाउँदैनौं । यसो हुनुमा वैद्यखाना उत्पादनमुखीभन्दा पनि अरु कुरामा पो बढी रुमलियो कि ? तर आयुर्वेदमा उत्पादमुखी भएर व्यापारमुखी भएर अगाडि बढ्ने हो भने त्यसमा अवश्य पनि प्रतिस्पर्धा बढ्छ । प्रतिस्पर्धासंग लड्न सक्नुपर्याे । विदेशी उत्पादक नेपालको जमिन प्रयोग गरेर यहाँका जडीबुटी सस्तो मूल्यमा किनेर औषधि बनाई नेपाललाई नै महंगो मूल्यमा बेचिरहेका छन् । यसमा अरुले कमायोभन्दा पनि हामीले त्यो बाटो अंगिकार नगर्दा केवल डाहा गरेको जस्तो हुन्छ । त्यसैले हामी पनि त्यो तहसम्म उत्पादनमुखी, गुणस्तरीय औषधि बनाउने तर्फ लाग्नु पर्दछ ।
– नेपालमा उब्जाउ भएका जडीबुटी भारत वा अन्यले महंगोमा किन्ने तर नेपालका सरकारी निकायले भने उपयुक्त मूल्य नदिँदा नपाउने भन्ने पनि छ नि ?
जडीबुटी उत्पादकले मुल्य महंगो गर्दा त्यो गाह्रो परेको पनि हो । तर यसको संकलन गर्ने वा वितरण गर्नेले बढी पैसा पाउने भएपछि नेपालका उत्पादकभन्दा भारतका उत्पादकलाई बेच्छन् । यस्तोमा बरु १० वर्ष लाग्ला । हाम्रा संस्थाहरुले खेती गर्न सक्नुपर्याे नि । साथै नेपालमा भएका जडीबुटीलाई नेपाल सरकारले नै नीति निर्माण गरेर स्वदेशी उत्पादकलाई दिने भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुप¥यो । यी विषय पहिले पनि थियो । वैद्य खानाले धेरै औषधिबनाउथ्यो । त्यसमा मृगको सिङबाट बन्ने औषधि, कस्तुरीको नाभीहरु, विभिन्न आखेटोपहारहरु यस्ता चिजहरु सीधै वैद्य खानाले लिनसक्ने प्रावधान थियो । अहिले पनि छ । तर अहिले हामीसंग इच्छा शक्ति नभएको हो कि जस्तो लाग्छ । म औषधि निर्माण गर्ने ठाँउमा त छैन । तर, चिकित्सकले लेखेको र बिरामीले खोजेको वैद्यखानाको औषधि पाइदैन । यसकालागि सम्बन्धित निकायमा तपाईंहरुले झक्झक्याउनु होला ।
– नेपालमा आयुर्वेद क्षेत्रले प्रगती नगर्नुको दोष कसलाई जान्छ ?
नेपालमा आयुर्वेदपछि पर्नुमा शुरुमा त आयुर्वेदकै कमी कमजोरी देख्छु । हाम्रो योजना के हो ? हामील के गर्ने ? सरकारी लेभलमा खुलेका संस्थाको आफ्नो उदेश्य के हो ? त्यो संस्थाले त्यो उदेश्य पूरा गरेको छ कि छैन ? त्यो हेर्नुप¥यो । सेवामुलक संस्थाले सेवा नदिने, उत्पादनले उत्पादन नगर्ने, अनुसन्धानले अनुसन्धान नगर्ने, नियमन गर्ने संस्थाले नियमन नगर्ने, अनि संस्था हुने काम नहुने भएकाले यो अवस्थामा आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
– अन्त्यमा, आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरदेवी के हो ? यहाँबाट के हुन्छ ?
आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरदेवी नेपाल सरकारले आयुर्वेद क्षेत्रमा खोलेको दोस्रो पूरानो संस्था हो । यसको १०५ वर्षको इतिहास छ । आधुनिक चिकित्सा संगसंगै आयुर्वेद र परम्परागत चिकित्साको नेपालमा आवश्यक छ भनेर यो संस्था खोलिएको थियो । त्यही परम्परागत चिकित्सा, जुन सस्तो छ, सजिलो छ त्यसलाई सर्वसुलभ रुपमा दिन नरदेवी अस्पताल कटिवद्ध छ । नरदेवी चिकित्सायलमा नेपाल सरकारले निशुल्क दिने औषधि व्यवस्था अनुसार परीक्षणपछि अन्य अस्पतालमा सरकारले निःशुल्क एलोपेथी उपलब्ध गराए जस्तै हामी पनि उपलब्ध गराउँछौ । त्यो बाहेक हामी मार्केटिङ गर्दैनौ । यहाँका औषधि कहीँ लगेर बेच्दैनौं । यो चाँही विशुद्ध सेवामुखी भएको हो ।